Izindlela Ezincane Ezaziwayo Zokondla Ogwini - Ellicott Dredges
Izindlela Ezincane Ezaziwayo Zokondla Ogwini
UPonce de Leon Inlet, ama-FL-Crews anikezwe imvume yi- Amasosha Wempi Yezempi yase-US Onjiniyela Bezempi (USACE) ukuqala ukwehla kuPonce de Leon Inlet. Lokhu kufanele kukwenze kuvikeleke kakhulu kuma-angler ukuzulazula. Ngaphezu kwalokho, ukuphinda kudilizwe kuzonikeza ukondliwa okwengeziwe kolwandle ogwini oluseduze. I-Inlet uqobo ayizange igcinwe kuze kube manje eminyakeni engaphezu kweyishumi ngokusho kwezikhulu zeCorps.
Abasebenza kulo msebenzi sebevele sebeqalile isigaba sokugqugquzela iphrojekthi ye-hydraulic dredging ethatha izinyanga eziyisishiyagalombili. Eqinisweni, amalungu eqembu elisebenza kulo msebenzi kulindeleke ukuthi asuse cishe i-38,000 ft² (3,530 m²) yesihlabathi nemfucumfucu. Ukudilizwa kufanele kukhuphule ukujula kwamanzi kuze kube cishe kwi-12 ft (3.65 m). I-USACE ixhasa ngezimali futhi inikeze uCavache (Incorporate) wePompano Beach inkontileka.
Iqembu elivela ICavache Inc, (okungumnikazi futhi osebenza nguMnu. Adam Adache kanye noMnumzane Anthony Cavo), uneminyaka engaphezu kwe-100 yeminyaka yokuhlangenwe nakho kokuhlangana kwe-hydraulic. Phambilini basebenze ezinhlotsheni ezifanayo zamaphrojekthi afana nephrojekthi yaseFlorida Inland District. Iqembu elivela kuCavache lizobe lisebenzisa i I-Ellicott 1170 "Dragon" dredge eyaziwa ngokuthi yi- “Maya Caelyn” ukuqeda lo msebenzi.
Umngcele we-cutterhead dredge uyindawo ephakathi nendawo eyenzelwe ukusebenza kahle ezimeni ezijwayelekile ezitholakala kuma-Atlantic inlet, neziteshi zokungena zisuka eLwandle ziye emifudlaneni engaphakathi yogu lolwandle.
Imininingwane yephrojekthi kaPonce de Leon
"Yini ehlukile ngale phrojekthi ethile ukuthi le yiprojekthi yokubekwa kokulahlwa kolwandle edinga ukupompa impahla kude nolwandle. Ibanga lokumpompa lide impela, futhi iqembu lethu lisebenzisa ama-boosters amaningi ukuqeda lo msebenzi, ”kuphawula uMnikazi weCavache Principle u-Anthony Cavo.
Udoti nesihlabathi esanqwabelana ngesikhathi seSiphepho u-Irma noMathewu sabangela ukuba kuxhaswe ngolaka. Futhi, izinto zokwakha ezibangelwa ukudotshwa kuzophonswa kuPonce de Leon Inlet. Izindwangu ziyobe zihanjiswa endaweni eseduze bese zisetshenziselwa ukusiza amabhishi endawo anempilo. Lapho inqubo yokwakhiwa kabusha isiqedile ukugeleza kwamanzi kuzothuthuka kakhulu esifundeni esiseduze. Ukwehlisa ukungena ngaphakathi kufanele kuqinise ugu lolwandle phakathi nezivunguvungu ezilandelayo ezenza kube lula ukuba imikhumbi ihambe ngokukhululekile mayelana nokungena.